Prezidaantiin Ertiraa – Isaayyaas Afewarqii, ka muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa – Dr. Abiyyi Ahimed, wal-dhibdee daangaa biyyoota lameenii furuuf walta’insa bara 2000 Aljersitti mallatteessame akka hojii irra oolchan ka beeksisan irratti mari’achuuf jila isaanii ka gara Itiyoophiyaatti ergan tahuu beeksisan.
“tarkaanfiilee itti aanana irratti dubbachuuf, jila gara Finfinneetti erguuf qophii dha,” jedhan – Prezidaantichi Isaayyaas.
Gama Itiyoophiyaatiis, mootummaan jila Ertiraa simatee waliin dubbachuuf qophii tahuu isaa – dubbi-himaan Ministirii Dhimma-alaa Itiyoophiyaa – Obbo Melles Alem VOA-tti himanii jiran. “Kun yaada gaarii dha . Gama keenyaan, Itiyoophiyaan Ertiraa waliin dubbachuun qophii tahuu ishee mirkaneessitee jirti. Muummichi-ministaraas har’a, deebii gaarii kana simatanii, gammachuu isaanii ibsanii jiran” jedhan – Obbo Melles Alem.
Itti-fufuudhaanis, gama keenyaan akka amannutti – hariiroon biyyoota lamaan gidduu, waa’ee daangaa caala. Hariiroo kana gara boqonnaa haaraatti ceesisuuf murachuu keenya irra-deebinee ibsina. Kun akka tarkaanfii gaariitti ilaalamuu danda’a. Jila Ertiraa, kabajaa guddaadhaan simannee waliin mari’achuuf qophii dha – jedhanii jiran.
Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa, Dr. Abiyyi Ahimedis, gammachuu isaanii ibsuun, biyyoonni lameen gara fuul-duraatti nagaa fi jaalalaan akka waliin jiraatan abdii qaban beeksisanii jiran.
Guutummaa oduu isaa dhaggeeffadhaa